नभमा "आत्मा बस्ने घर" |Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.| Radio Nagarik 100.4 Mhz Halloween Costume ideas 2015
नभमा "आत्मा बस्ने घर"
धनकुटा, भेडेटार गा.बि.स. नाम्जेको "आत्मा बस्ने घर" बडो रोचक परम्पराको एक कडी पाएँ । हालै विश्व प्रसिद्ध टिभी च्यानल नेशनल ज्योगरफिकमा यस वारे एक डकुमेन्ट्री हेर्ने मौका पाएर त्यता डोरिएको थिए ।
बिभिन्न समुदायमा मृत्यू संस्कारको भिन्नभिन्न परम्परा छ । केहीले मृत शरिरलाई पोल्छन । कोहीले जलसमाधी दिन्छन भने धेरैले माटो मुनी गाड्ने गरेका छन् । मस्तांगमा त एउटा समुदायले मृत देहलाई एकदमै अग्लो टाकुरामा लगी राख्छन् । पंक्षीहरूले लाश खाउन र तृप्त होउन भन्ने मान्यता छ त्यहाँ । यसरी बिभिन्न समुदायहरूले भिन्न भिन्न भौगोलिक अवस्थामा चिहान बनाउने गरेका हुन्छन् । मगरहरू गाउँ बस्तीको सबैभन्दा अग्लो स्थान, कुनै टाकुरो वा ढिस्कोमा चिहान बनाउदै आएका हुन् । मृत आत्माको निर्विध्नता र शांतिको परिवेश कायम रहोस् भन्ने यसको अभिप्राय रहेको मानिन्छ ।
मगर समुदाय भित्रका ११३ जातका मूलथलोहरूमा रहेका चिहानहरूका ढुंगो ल्याएर एउटा खुलाघरमा कलात्मक ढंगबाट राखी "आत्मा बस्ने घर" बनाईएको छ । वास्तवमा मगर समुदायका पूर्वजहरूको चिहानको ढुंगो ल्याएर यो स्थल बनाईएकोले यो एक अर्थमा पूर्वजहरूको आत्मा बस्ने घर हो ।
सबभन्दा मज्जाको कुरो त के भने मारवाडी समुदायका गोयल थरका एक जना प्रवासी अमेरिकनको पहलमा अमेरिकाको क्याथलिन विश्वविद्यालयले यस घरको डिजायन गरी निर्माण कार्यमा आर्थिक सहयोग गरेको हो । यस कार्यमा स्थानीय मगर समुदायका समाज सेवी मध्ये गुंजमान मगरले बडो सक्रियता देखाए । म आज उनैको घरमा पाहुना बस्न पुगे र उनैको मुखबाट मगर समुदायका त्यस क्षेत्रको करिब ६०० बर्ष पुरानो कतिपय परम्पराहरू जान्न पाएँ । यसपालीको मेरो दशैं यसरी नै बित्ने छ क्यार !
स्रोत -jay prakash Anand Facebook